Manoratra momba ny Sinema ireo bilaogera Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 13:54 GMT
Ny sarimihetsika Iraniana no nahazo loka tamin'ireo fetibe maro nandritra ny taona maro. Misaotra ireo talen'ny sarimihetsika tahaka an'i Kiarostami, Panahi, Majidi, … Afaka mirehareha amin'ny sarimihetsiny ny Iraniana. Isan-taona dia sarimihetsika Iraniana vitsivitsy no mahita lalana amin'ny teathra any Andrefana. Mibilaogy ny sasany amin'ireo tale Iraniana sy mpianatra sinema ary mizara amintsika ny zavatra noforonin'izy ireo, ny hevitra, ny sarimihetsika ankafizin'izy ireo indrindra sy ny hevitra ara-politika.
Nisafidy anarana tena manintona izay mampahatsiahy antsika ny tontolo majikan'ny sarimihetsika ny sasany amin'ireo bilaogera. Iray amin'izany bilaogy izany New Wave (rohy amin'ny teny Farsi). Manolotra sarimihetsika vaovao toy ny Night Watch ny New Wave ary manome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny Hotel Rwanda. Bilaogy iray hafa ny Cinemaye Azad (rohy amin'ny teny Farsi) (Free Cinema) izay mitatitra momba ny sarimihetsika Iraniana any an-tsesitany. Namoaka ny resadresaka niarahana tamin'i Alamezadeh (rohy Farsi), tale Iraniana malaza ilay bilaogera. LongShot (rohy amin'ny teny Farsi) dia bilaogera hafa mamoaka fanafenan-tsoratra (na ampahany amin'ny fanafenan-tsoratra).
Talen'ny sarimihetsika Iraniana izay nenjehina taloha sy taorian'ny revolisiona i Alamezadeh. Mibilaogy ity tale monina any Holandy ity izay namorona tantara foronina sy lahatsary fanadihadiana. Ny bilaoginy dia manome fampahalalana voalohany momba ny zavatra foronony, ny asa sorany, ny heviny politika sy ny fitsangatsanganana. Tena namorona bilaogy momba ny zavakanto sy ny literatiora izy. Momba an'i Mosadegh ny sangan'asany farany.
Manoratra sy mamorona mihoatra ny politika, fanangonan-tsonia sy gadra politika ireo bilaogera Iraniana. Hita tsara anatin'ny tanàna bilaogy Iraniana ny Zava-kanto.